Tag: kuyedza email | Martech Zone
Tag: kuyedza email
38 Email Kushambadzira Zvikanganiso kuti Tarisa Usati Wadzvanya Tumira
Muvhuro, March 16, 2020 Muvhuro, Nyamavhuvhu 23, 2021 Douglas Karr
Pane toni dzakawanda dzekukanganisa iwe dzaungaite neyako yese email email kushambadzira chirongwa ... asi iyi infographic kubva kuemail Monks inotarisa kune avo ridonculous zvikanganiso zvatinoita tisati tadzvanya kutumira. Iwe uchaona zvakati wandei kutaurwa kwevamwe vedu pa250ok pane dhizaini uye kuendesa mashandiro. Ngatisvetukirei mukati: Kununurwa macheki Tisati tatanga, isu takagadzirirwa kutadza kana kubudirira? Vatsigiri vedu pa250ok vane mhinduro isingaite iyo inogona kubatsira
Chiono6: Inotengeka, Yakasarudzika, Yekushambadzira Yekushambadzira Yekugadzirisa Solution
NeChishanu, Gumiguru 21, 2016 Douglas Karr
Kambani hombe yekutengesa email kuAustralia ikozvino iri kuwedzera kuUnited States, ichipa mhinduro inogadziriswa, yekushambadzira-bhizimusi kumakambani epamusika uye vamiririri nemutengo unodhura. Vision6 inosanganisirwa email kushambadzira otomatiki mhinduro yakavakirwa vatengesi uye vamiririri. Vision6 inosanganisa email automation, SMS, mafomu uye zvemagariro midhiya mune iri nyore kushandisa interface. Zviuru zvemazana edhijitari anosanganisira Clemenger BBDO Australia, pamwe nezvikwata zvemukati zvekushambadzira kumakambani anosanganisira Audi Sydney, BMW
10 Matipi ekufananidza Email Kushambadzira uye Yemagariro Midhiya
Mugovera, July 16, 2016 Chishanu, July 15, 2016 Douglas Karr
Kana iwe wanga uri muverengi webhuku rino kwechinguva, iwe unoziva kuti ndinozvidza zvakadii email nekupesana nevezvenhau nharo kunze uko. Kusunungura kugona kuzere kwechero zano rekushambadzira, kuenzanisa iwo mishandirapamwe pamatanho kunosimudzira mhedzisiro yako. Hausi iwo mubvunzo wekurwisa, iwo mubvunzo we uye. Nerumwe neumwe mushandirapamwe pane chiteshi chega chega, ungaita sei kuti uve nechokwadi chekuwedzera kwemitengo yemhinduro pane yega chiteshi iwe yauinayo Email? Zvemagariro? Kana
Email paAcid: Email Kuedza, Troubleshooting uye Zvakanakisa Maitiro
Chitatu, Kurume 23, 2016 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
Pane chikonzero makambani mazhinji anoronga kushandisa yakawanda nguva nemari kushambadziro yeemail muna 2016: email kushambadzira kunoenderera nekubata yakakwira ROI yenzvimbo dzese dzekushambadzira dhijitari. Wese mushambadzi ane yavo yavanoda email sevapi uye email kusimudzira yekutarisa. Asi zvakanyanya kazhinji ivo vanokanganwa crux yemushandirapamwe: kuyedza yavo email pane akawanda madhijitari uye vatengi vasati vaisa mushandirapamwe wekutumira. Kunyangwe akawanda ekuyedza mishandirapamwe nekutumira email
Maitiro Akanaka Kwazvo Ekutumira Email kune Vanokurudzira
Svondo, Zvita 13, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Sezvo isu takadzikwa nehunyanzvi hwekudyidzana neruzhinji zuva nezuva, tinosvika pakuona akanakisa uye akashata emaimendi ekuparidzira maemail. Isu takagovana tisati tanyora inoshanda podhi uye iyi infographic ndeyekutevera kukuru iyo inosanganisira kufambira mberi kukuru. Icho chokwadi ndechekuti makambani anofanirwa kuvaka ruzivo uye chiremera chechavo online. Kunyora zvemukati hazvina kukwana futi, iko kugona kwekukanda kwakakura zvemukati uye kuti zviigovaniswe ndiko